> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka BlackBerry Shuclada
Maxaad sawir tirtiray & video laga soo saari karaa BlackBerry Shuclada
Dadka intooda badan ma oga in kuwa sawiro iyo videos si qalad ah la tirtiro ka Blackberry Shuclada la raadsan karo. Dhab ahaantii, marka aad tirtirto sawiro ama videos, ay si dhab ah uma tageen, laakiin noqon oo kaliya la arki karin, oo ah meesha ay degan waxa lagu calaamadiyaa sida banaan oo diyaar u ah files cusub. Ilaa iyo inta meesha aan la isticmaali by files cusub, waxaa jira fursad fiican si aad u hesho iyaga oo dhan dib eber tayada khasaaro.
Sidee inuu ka soo kabsado photos & videos ka ka BlackBerry Shuclada
Ha u qaadan sida shaqo aad u adag tahay inuu ka soo kabsado sawiro iyo videos tirtiray ka BlackBerry Shuclada. Sida xaqiiqadu, waxaad u baahan tahay oo dhan waa BlackBerry Shuclada qalab kabashada sawir, kuwaas oo kaa caawin karaan inaad hesho dib dhammaan faylasha tirtiray. Weli ma hayso wax fikrad ah? Halkan waa soo jeedinta: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Barnaamijka sawir Tani waxay u ogolaaneysaa in aad ka bogsato sawiro iyo videos BlackBerry Shuclada, iyadoo aan loo eegayn in aad tirtirto ama iyaga qaab. Waxa kaliya qaadataa 3 talaabooyin fudud.
Isku day version maxkamad free of this BlackBerry Shuclada software kabashada sawirka hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Step1. Connect aad BlackBerry Shuclada in kombiyuutarka
Ka hor inta wax kale samayn, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad telefoon si kombiyuutarka. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho cable ah digital in ay ku xidhmaan phone oo dhan, ama isticmaal akhristaha kaarka in ay ku xidhmaan kaadhka xusuusta. Labada iyaga ka mid ah si fiican u shaqeeyaan. Markaas ordi barnaamijka aad rakibay on your computer. Halkan aynu isku dayi version Windows ah. Guji "Start" si ay u bilaabaan soo kabashada file BlackBerry Shuclada.
Step2. Sawir & video Scan aad BlackBerry Shuclada
Next, dooro Jidka drive aad BlackBerry Shuclada oo guji "Scan" si aad u ogaato dhammaan faylasha tirtiray aad BlackBerry Shuclada.
Step3. Kabsado sawirada tirtiray & videos ka BlackBerry Shuclada
Waxaad tahay tallaabo la soo dhaafay hadda. Halkan waxa aad ku eegaan karo oo calaamadee dhammaan faylasha recoverable. Waxaad calaameysaa kuwa aad dib u doonayaan oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad BlackBerry Shuclada ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada Blackberry Shuclada